Sei Tava Vakarurama pamberi Mwari? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Sei isu vakarurama pamberi paMwari? Hazvina zvirokwazvo iroro kuremekedza umo Kristu waiva mutadzi. Nokuti vakafunga nenzira panzvimbo yedu, kuti ave tsotsi panzvimbo yedu, uye kuti abatwe somutadzi, kwete nokuda kwake mhosva, asi kune avo vamwe, sezvo akanga akachena uye ndisaendeswa ose mhosva, uye kuti kutsungirira chirango zvakafanira kwatiri- kwete iye. Zviri saizvozvo, zvirokwazvo, kuti tava vatsvene maari- kwete nekuda basa redu kugutsikana kuti kururamisira kwaMwari nokuda kwemabasa edu, asi nekuti tiri vatongwe maererano nokururama kwaKristu, zvatakakutadzirai akafuka nokutenda, kuti ave zvedu.
Verenga izvi zvishoma nezvishoma uye ngaiparadzanise kunyura muzvinhu! Ndakabva mhiri mazwi ichi paunenge uchigadzirira mashoko angu pamusoro 2 Corinthians 5:18-21 nokuti pazvivako Outreach National Conference. Zvinhu zvakanaka
Mary Gayle • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:09 ndiri • pindura